7 Iindlela To Stay Healthy Nakuba Ukuhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Iindlela To Stay Healthy Nakuba Ukuhamba
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/06/2020)
Ekubeni ngoku swine coronavirus baphosa zohambo wonke zibe dlakadlaka, kunokuba nzima ukwazi ukuba kufanele ugcine iholide yakho ngexesha coronavirus okanye hayi. Nangona asikwazi ukwenza eso sigqibo kuwe ukuba ngaba ukhetha ukuqhubeka phezu kubalulekile ukuba qiniseka ukuba uthatha amanyathelo ukukhusela impilo yakho. Ukuze kufezeke, apha zi 7 tips okuhamba uncedo uhlale usempilweni ngoxa esijikelezayo.
Train Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
Hlala Healthy Nakuba Ukuhamba Number 1: Hlamba izandla zakho
Lo mntu kubacacele, kodwa ukuhlamba izandla zakho yenye yeendlela eziphambili uzigcine usempilweni. Ngoba? Ngokutsho Service Health National, “Ukuhlamba izandla zakho ususa kakuhle ngokudlulisa, virus, neentsholongwane ukubavimba badlulela nabanye abantu izinto, leyo ukusasaza izigulo ezifana ityhefu ukutya, flu okanye ukurhuda. Enokukunceda stop abantu icholwa izifo kunye bazaneka kwabanye”.
Kalula, ukuhlamba izandla kokuba da bonke gook ukuba yande yonke imini. Oku ikakhulu ngantoni abahambi. sites kubakhenkethi zizele ingxokolo abantu abasehlabathini jikelele. Ukuba amawaka abantu ngosuku abachukumisa netambo eyodwa, kwaye nje enye eye wahlamba izandla zakhe, Ucinga ukuba kufuneka sibe njani ezimdaka!
Ukuba kwindawo ngaphandle namanzi ahambayo ezaneleyo okanye isepha, kuza kufuneka uqinisekise owuthengileyo wasebenzisa sanitizer ngesandla rhoqo. Nangona oku koma izandla zakho ukuba zisetyenziswa kakhulu, kukwakho ze sanitizer isandla ezibandakanya amacandelo amafutha ukuze izandla acocekileyo kunye nesikhumba ethambileyo.
Kuba Kudala kwaziwa ukuba ulele ngokwaneleyo kakubi kuchaphazela amajoni omzimba. Ngoxa lalisekhefini oko kusenokubonakala ngathi asiyongcamango ilungileyo nelokuvuka kuqhuma ukusa, ukubaleka kwada kwaphakathi kobusuku. kunjalo, inyaniso kukuba ulale ngokwaneleyo kakhulu impactful kunawe kengoku ucinga ngakumbi. Ebusuku, umzimba wethu kuthatha ixesha lokuba ukwazi aze aphilise. Ixesha ngaphantsi esilichitha lithetha yokozela ixesha ngaphantsi uya kukwazi ukuthatha unonophelo wena.
Inyaniso, izifundo baye babonisa ukuba abo benza ubuthongo ngokwaneleyo ubunzima ixesha elide ezingalunganga ezifana noxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye nokulahlekelwa memory. Ezi ziphumo ihambisana kuphela xa ojikelezayo, ndenjenjalo wena inceba kwaye uqinisekise undibetha hay ubuncinane iiyure ezisixhenxe ubusuku.
Ngelixa kunokuba nzima ukufumana i-zzz yakho ukuba ushukumisile ezininzi imimandla yexesha kwaye bathwele ubunzima jet lag, uyakwazi ukusebenzisa iindlela ezininzi ezahlukeneyo ziyawunceda umzimba wakho bakhululeke kwaye aphile bubuthongo. Ezi ziquka ishawa efudumeleyo okanye ibhafu, spray lavender-anuka, enenjongo, nkqu ikomityi efudumeleyo yeti. Kufuphi, ukufumana intabalala ukulala kunyanzelekile ukuze uhlale usempilweni ngeli ojikelezayo.
Amarheya ukuya eLyon amatikiti oLoliwe
I-Paris ukuya eLyon amatikiti oLoliwe
Hlala Healthy Nakuba Ukuhamba ke Kuphephe Tap Water
Ukuba kwesihloko ndaweni kakhulu ayaziwa, kufanele kube Kucacile ke ukuba uza kufuneka ukuthintela amanzi etephini. Ngoba? Ngenxa amagciwane ngaphakathi yamanzi endawo zezi ndawo-ngqo, kunye / okanye neentsholongwane amathumbu awukhathazekanga konke konke ukulungele ukuzisingatha. Amawaka abantu ngonyaka ngamnye afumane ukusela lokugula yamanzi endawo, phumela ezifana ukugabha kunye norhudo aqhelekileyo kakhulu. Njengoko alunywe, malunamathele iibhotile zamanzi xa sele kude kuzo zone yakho intuthuzelo. Oku uya kabili ukuba kwiindawo kunye nobunono eyayivela. Amanye amazwe kuphuhliswa ngaphantsi Ungasebenzisa amanzi okusela asuka kumthombo elifanayo kwiindawo inkonzo yangasese. Ewe, yiloo nto!
kwakhona, qiniseka ukuba ukuphilisa ngokufanelekileyo. amaqondo obushushu Hot kwaye umsebenzi onzima ke itikiti ekhawulezayo ukuya esibhedlele ngaphandle kokusela amanzi ngokwaneleyo.
EBrussels ku Amsterdam Uqeqesha
EBerlin ku Amsterdam Uqeqesha
Paris Amsterdam Uqeqesha
Fumana izithombe zakho
Kuxhomekeka apho uya khona, kusenokufuneka ukufumana kuqhume ezizodwa ekliniki zokuhamba okanye kwiziko lokhathalelo lwempilo. Oku kuyinyaniso ngakumbi ukuba amanye amazwe yaba ngaphantsi, esekhona yezifo zemidlalo ezifana imalariya kunye icesina emthubi. Ngaphambi kokuba intloko kwi uhambo lwakho, khangela Centres for Disease Control and Prevention (CDC) website. Apha ungenza Ungafumana iimfuno ezithile na ukuba ilizwe elo uhambela. Ukuba awunguye evela United States, kwakhona ujonge iwebhusayithi yakho yobulali, ezifana NHS, iimfuno zakho ukuhamba esempilweni.
Frankfurt ku Berlin Uqeqesha
Leipzig ku Berlin Uqeqesha
Hanover ku Berlin Uqeqesha
EHamburg Berlin Uqeqesha
Stay Healthy: Musa Touch Face yakho
Njengokuba sele sathetha ngayo ngokuhlamba izandla, ngoku lixesha lokuba intetho malunga ubuso bakho. Ngokufuthi uya kubona abantu waqamela lwabo ezandleni zabo, dongeni, ezinokhwekhwe, okanye ngenye indlela uthinte ubuso babo. Yinto ngumkhwa nzima ukwaphula kodwa izandla zakho ebusweni bakho ukuba uzama ukuhlala obusempilweni ngexesha esijikelezayo.
Yinto ingqondo, njengoko izandla zakho ndachukumisa izinto ezininzi kangaka imini yonke. Kwi kuloliwe okanye ndiza, uya kuba itafile yetreyi, i ngomqala. kunye nezinye iindawo ezahlukeneyo kwindawo eqhelekileyo ukuba okukuyo lento. Ngaphandle kokuba wena ukuhlamba izandla zakho lonke ixesha ubamba into (okanye kwenzeka ukuba unxibe iiglavu), ukuba loo nto kungcono ukuba ugcine izandla zakho ebusweni bakho ngamaxesha onke.
Iyavakala ukuba uza kutya kakuhle lo gama kwiholide, kunene? Emveni kwakho konke, yintoni na Spain ngaphandle itshokolethi kunye churros, yaye yintoni France ngaphandle Baguette? Le nto sithetha, kunjalo.
ukutya okumnandi yonke kuhle, kodwa kufuneka baqinisekise ukuba sele ukutya okunempilo ngokunjalo. Landela le iphiramidi yokutya kwaye switsha abo okukhona ezinzulu eziqhotsiweyo kwezinye imifino yonke kanye ngeliny'ixesha. Ukuba unayo indawo kuba, eze mzimba kunye nawe ukuba wena imiphako up. Qiniseka ukuba vitamin c, probiotics, kunye nezinye kulula-to-kudla vitamins.
Oku ezininzi ezibalulekileyo nokusela utywala xa useluhambeni ngokunjalo. Oku kudala kakuhle ukuba ukusela utywala kakhulu kunokukhokelela kwinkqubo omzimba ezibeka (yaye ezinye hangovers abangendawo). Ukuba uzama ukuphepha abagulayo ukwenza, qiniseka ukuba ugcine obusela ngayo utywala ukuze ubuncinane. Emveni kwakho konke, who wants to visit the Mona Lisa with a common cold?
Graz eVienna Uqeqesha
Prague eVienna Uqeqesha
Last Stay Healthy Tip: Coca Area wakho
Kungaba i kobuxhakaxhaka, kodwa kulungile ukuba uzisa ezinye usula iintsholongwane kunye nawe xa uhamba. Ngoba? Ukucoca zonke ezo iitafile yetreyi kunye nezihlalo senze sele sitshilo. Clorox usula zingathengwa ngobuninzi bafakwa iingxowa ziplock. Uyakwazi ngoko kubangenisa nawe kwi nithwale ku.
Qinisekisa ukuba asule leengalo ezo, pocket seatback (ukuba unayo), kwakunye bopha ngomqala amagciwane yakho uncedo ukuqinisekisa ukuba yakho ihlale ndawo ucoceke kangangoko kunokwenzeka.
Munich ku Zurich Uqeqesha
EBerlin ku Zurich Uqeqesha
Basel ku Zurich Uqeqesha
Vienna ku Zurich Uqeqesha
Abantu bayagula xa useluhambeni kaninzi ngaphezu ngenye into. Musa ukuba njengaye wonke umntu. Thatha nokuzikhathalela wena kunye nokusetyenziswa Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Iindlela To Stay Healthy Nakuba Ukuhamba” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / de ukuze / ts okanye / es kwiilwimi ezininzi ozikhethele.
#safetravel europetravel healthytravel trainjourney train Travel travelsafe
Carissa kuba ndingakhange ukufunda nokubhala owenza yadleka impahla yayo ngokuzisa ezona kumancam umdla kubafundi bakhe. ke yena ligilwe 40 amazwe kuye bucketlist okwangoku kwaye akukho ngenjongo kwamfundisi. Nokuba ephunga nekofu e Napoli okanye kubhiyozelwa Harry Potter e Edinburgh, yena isini gqitha ukudibana nabantu abatsha ubone izinto ezintsha. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
The Best Ski Resorts Ukuze Visit By Train
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Business ahambe ngetreyini, Iingcebiso zokuhamba ngeMoto, Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
10 Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi
12 Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe